Siilaanyaa Yaabay: WQ: Baxnaan | Somaliland Today
← Somaliland Oo Hoy U Noqonaysa Ka Ganacsiga Maandooriyaha, Burco Oo Laga Beeray Xashiishad Iyo Shan Foosto Oo Khamri Ah Oo Booliisku Qabtay
” Kaftanka maanta, Sheekaddii Madaxwaynayaasha ” W/Q Axmednuur Guruje →
Siilaanyaa Yaabay: WQ: Baxnaan
dhalin weeye magaallo
.dhaqankoodu mid maaha .
Dhaqane:Waar kaalay ma hadaa hantidii dhamayd ee waddanka laban in ku qorteen?
Dhaashane;Waar adeero wax fahma .sow ma ogidin inaan la ina aqoonsanayn?sidee rabtaan inaynu aduunka ula macaamilo hadaa wax walba ka qaylisaan?
Dhaqane;Oo kaalay show mususiqii aa lahaydeen waanu la dagaalamaynaa waa u dagaalamayseen.walee maan khaldanayn markaa idhi;Siilaanyaa yaabay.
Dhaashane:Oo maxaad aragtay?
Dhaqane:nin baa maalin dhaweyd sheeko aan la yaabay iiga sheekeeyey.Wuxuu yidhi,niman
odayaal ah baa agaasimaha guud ee wasaarada warfaafinta u shaxaad tegay.Wuxuu ku ydhi,odayaal wax ma idiin sheegaa ?Aniga laban in baa wasaarada iiga sareeya .waa wasiirka iyo wasiir ku xigeenka .
Wasiirku lacagta xayeysiiyada ayuu cunaa .wasiir ku xigeenkuna lacagta ogaysiiyada ayuu cunaa .Anigu lacagta tacsiyadaha ayuubaan cunaa .sida darteed meesha waxba kuma hayee markaa maqashaan dhawr nin oo madax ah oo dhintay oo la tacsiyadaynayo ii kaalaya.
Nimankiibaa intay is eegeen yidhi,waar meesha inaga keena.Adeer ta xabaala qodkana ku darsoo maca salaama.
Dhaashane;waar horta miyaad waalantay mise waad soo wadataa?
Dhaqane:Car adaa miyir qabee suaal fudud mak u waydiiyaa?
Dhaashane:Tu adag keen hadaad rabto.
Dhaqane:Shaadhka markaad gashanayso ma gacanta midig baad horaysiisaa mise ta bidix?
Dhaashane:Ban iyo kir.